Ubufundamentali obudala ukuvuleka? URabhi uMichael Avraham
Ubufundamentali obudala ukuvuleka?
Iimpendulo > Udidi: Ifilosofi > Ubufundamentali obudala ukuvuleka?
Josephon Ubuzwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Andazi ukuba uRabi uye weva malunga nento eyenzekayo kwiminyaka yakutshanje kuluntu olungekho semthethweni lwaseBa'alei Teshuvah ngoko ke ndiya kucacisa kwiminyaka ukuba uninzi lweBa'alei Teshuvahs ngendlela yokulahla indlela yokuphila ye-ultra-Orthodox kwaye (Mna ngokwam ndingunyana kaTeshuvah owadelela ubuOthodoki obuphezulu) Namhlanje kakhulu iOthodoki ebonakala ngathi yale mihla kuzo zonke iimpawu zayo nangona kunjalo xa ujonga umgca wabo wengcinga umntu unokubona ubufundamentali obucacileyo. yenkolelo elula yabantu ebambelela kumgca olula we-halakhah nangaphezulu kwaye ndiyazibuza malunga nesiganeko esiphikisanayo kangangokuba ii-Fundamentalists eziphikisanayo zidale uluntu olwahlukileyo noluvulelekileyo, ndingatsho ukuba kungenxa yokungabinasini kweqela le-Ba'ath kunye Noko ke, uninzi lwamalungu eBa'ath endiye ndadibana nawo luphila ngonqulo ngandlela zonke.
Ngaba urabhi unokuwuchaza lo mcimbi?
Iithegi zombuzo: ט
Inkcazo yakho inomdla, nangona ndingazi ukuba imele kangakanani (ingaba ngokwenene "uninzi lwabaphethe iimpendulo").
Kukho iinyaniso ezimbini ezicacisayo apha: 1. ukuba zisiba zezi mini. 2. ukuba bagcine ukutolika kobufundamentali kwehalakhah nenkolelo.
Andiqinisekanga ngesetingi zakho. I-Orthodoxy yanamhlanje ihlala idityaniswa nokutolika kwe-halakhic eguquguqukayo. Ngokuchazwa, kubonakala ngathi ngumsebenzi kwinto ethile ukuze uziphilise, okanye ukufunda imibongo noncwadi, okanye umsebenzi wobugcisa. andicacelwanga kum.
Zininzi izizathu zoku: ukwazi elinye ilizwe (kukho enye indlela phambi kwabo). Ukudinwa bubufundamentali obugqithisileyo (ukusabela kwinyathelo labazali kwelinye icala, nokuxelisa imvukelo kwelinye). Ngokuqinisekileyo kukho izizathu zengqondo (i-traumas. Abazange bakhule bemiliselwe kwisithethe se-ultra-Orthodox. Abazali babo nabo banohlobo olufunayo).
Kwangaxeshanye abanayo enye imodeli yenkolo kuba bayayibona i-secularism okanye i-ultra-Orthodoxism. Mhlawumbi yiloo nto uluvo lwabo lwe-halakhah luyi-ultra-Orthodox.
Zonke ezi ngcaciso zinokwenzeka, kodwa lo mcimbi ufanele uviwo olucwangcisiweyo.
uGidiyon Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Ngokuqhelekileyo ukuphindwa kwempendulo akwenzeki ngenxa yezizathu zengqondo, (ewe, ndeva malunga "nooprofesa" ababeqinisekile "ngemilinganiselo" kunye "nengxoxo") ngoko ukusebenzisa iingqondo zabo kuya kubangela ukuphindaphinda kombuzo kwakhona.
mikyab Abasebenzi	Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Oku kujikelezwa ngokubanzi. Phantse inyathelo ngalinye lomntu liquka iindiza ezininzi, ezengqondo kunye nefilosofi. Kodwa zombini zikhona emva kwempendulo kunye nokuphuma kumbuzo.
Joyina abongezelelweyo 3,089 ababhalisile
Iziko kwimizimba emithathu enesiphelo
'Omkhulu' wathi umphathi ofudukela ebuchotsheni uya kuphulukana nehlabathi lakhe elilandelayo. Ngaba oku kunzulu?
Ingcebiso: Incwadi yohlalutyo lwengqiqo
Ukubiwa kweekhamera zolonyulo
Ingxoxo yecosmological kunye nogqabhuko-dubulo olukhulu
UGqr. UPatricia Marie Vula Kwiithegi kunye neengxoxo, okanye: Ngaba ndingumEpikure? (Uluhlu lwama-74)
אא Vula Impendulo 'komkhulu' yathi umphathi ofudukela ebuchotsheni uya kuphulukana nehlabathi lakhe elilandelayo. Ngaba inzulu?
Umlomo wekrele Vula Impendulo kwingxabano ye-cosmological kunye ne-big bang
A' Vula Impendulo kwisiphakamiso: Incwadi yohlalutyo lwengqiqo
Ukwanengxaki negqwetha jikelele Vula Impendulo kwingxabano ye-cosmological kunye ne-big bang